Date My Pet » Ahoana no Hampifaliana Open Fifandraisana asa
amin'ny Li Yen
Last nohavaozina: Jan. 20 2021 | 3 min namaky
Misy tsipika avy amin'ny Brooke Fraser hira izay lasa "tena fitiavana dia fitiavana mafy". Mety tsy ho mahay kokoa. Tsy toy ny tamin'ny Mills & Boons tantara tantaram-pitiavana na Disney sarimihetsika, Tsy foana ny fifandraisana hiafara amin'ny mpivady mitaingina eny an-masoandro. Inona no tonga taorian'ny fanambarana ny fitiavana sy ny fanoloran-tena no ezaka. Matetika ny olona miezaka ho lavorary nefa afaka antitra haingana. Sarotra ny fiainana nefa tsy ampy ny hiatrika izay rehetra raiki-tampisaka tantara. Amin'ny lafiny iray hafa amin'ny mizana, misy ireo olona ao amin'ny fifandraisana izay misokatra ny mampiaraka, na nahita olon-kafa. Raha ny teny hoe "fifandraisana misokatra" dia bandied momba elaela izao, ny mazava famaritana ny hoe mitaky izany karazana fifandraisana mbola mampikorontan-tsaina ny ankamaroan'ny olona.
Inona marina no Open Fifandraisana?
Ny sasany milaza fa misokatra ho amin'ny fifandraisana dia manome ny olona ny fahafahana sy ny manovaova ny ho tia koa tsy ny lanjan'ny zavatra andrasana sy ny fanoloran-tena ny monogamy. Ny hafa indray opine fa ny fomba tena mihaja fotsiny ny mamela ny mpiara-miasa mba mamitaka eo amin'ny samy izy. Na inona na inona ny hevitry ny, misy famantarana mazava mba hampisehoana fa ny fifandraisana misokatra no miasa, rehefa nahavita dia ampiasaina tsara. Toy ny fifandraisana hafa, izany rehetra izany dia miankina amin'ny olona tsirairay izay maniry. Mazava, olona izay ao ireo karazam-fifandraisana dia atahorana hiatrika ny alahelo isan-karazany. Tsy toy ny mpiara-miasa amin'ny monogamous fifandraisana, fifandraisana misokatra ireo izay tsy manana ny safidy ny manao ny "izy / izy mamitaka ahy" karatra. Koa ahoana no hahazoana antoka fa mandeha ny fifandraisana misokatra dia mahomby sy maharitra iray?
Tanjona iraisana sy ny Fanoloran-tena
Hanombohana, tokony hisy mahasarika - na ara-batana sy ara-pihetsehampo - eo amin'ny roa tonta. Sady koa anie, izay ny lehibe indrindra ho antony mahatonga ny roa lahy no miaraka ao amin'ny toerana voalohany. Satria mamela ny tenany izy ireo hamoha varavarana ny trandrahana amin'ny antoko liana hafa tsy tokony derail avy ny hoe olona roa no nanapa-kevitra ny hanolo-tena tsirairay ao amin'ny ny fomba. Miasa avy amin'izany fifanintonana, ny fanapahan-kevitra ny fifandraisana misokatra ho mety fotsiny fa ny roa lahy dia mbola mazoto amin'ny trandrahana safidy hafa. Dia toy izany no, afaka mitantana ny fifandraisana misokatra dia resaka hahazoana antoka fa mahatakatra roa tonta ny "fitsipika" ny lalao. Tahaka ny fanao monogamous fifandraisana, ireo izay hanana fifandraisana misokatra ny fitsipika ihany koa. Ny fomba fahandro amin'ny fifandraisana misokatra mahomby dia manana roa tonta fahatakarana sy ny fanoloran-tena mitovy fitsipika.
Mitohy manao ny marina lavitra
Toy ny zavatra hafa rehetra eo amin'ny fiainana, ny fahamarinan-toetra dia ampahany lehibe amin'ny fifandraisana misokatra. Sady koa anie, ny fototry ny fifandraisana misokatra dia ny hoe misy salama fifampitokisana eo amin'ny mpiara-miasa. Ny hany fomba fa afaka miasa avy dia raha samy marina foana ny hafa. Izany ihany koa momba ny fitantanana andrasan'ny. Na dia nanana fifandraisana misokatra dia tena mitovy karazana fifandraisana hafa izay hitanao na aiza na aiza. Raha mbola roa tonta dia araka ny zavatra mahatonga ny fihetsehana ny fifandraisana sy afaka miasa hatrany manatrika ity tanjona, tsy misy antony ny fifandraisana misokatra dia tsy haharitra ny ela ny fipetrany. Zava-dehibe iray ilaina mba mahomby fifandraisana misokatra tsotra izao izany: Inona no miandry ny olona tsirairay avy izany? Raha izany no ao fampifanarahana, ny fifandraisana misokatra dia nametraka ny handeha.
Mazava ho azy, fifandraisana misokatra ho an'ny olona rehetra dia tsy. Toy ny karazana fifandraisana hafa, dia mety hiafara amin'ny ratram-po. Na izany aza, mety ihany koa ho fitaovana tena ilaina indrindra ho an'ny fifandraisana olona izay tiany ny miaraka amin'ny mpiara-miasa tsy tapaka raha manana fahafahana hihaona ny hafa miaraka amin'izay koa,. Maro no mety opine fa fifandraisana misokatra hanafika ny tena fototry ny tena dikan'ny fanoloran-tena sy ny fitiavana. Na izany aza, misy ihany koa ny toe-javatra andraisana mpiara-miasa ao amin'ny fifandraisana misokatra tena tsy mifidy ny hampiaraka, na mihaona hafa. Ireo izay mahita fahombiazana amin'ny fifandraisana misokatra matetika mahita fa nomena ny fahafahana hampiaraka ny hafa raha ny marina mitaona azy ireo ho akaiky kokoa ny mpiara-miasa. Raha ny marina ny manan-danja eo amin'ny fifandraisana dia tsy tena ny marika ka hisy hitafy azy ireo, fa ny fahafahan'ny antoko tsirairay hanao fanapahan-kevitra tsara miorina amin'ny fifanajana tsaina.
5 Mampiaraka fady Tokony Hisaraka sy Mandositra From
Dingana folo Hosting ny mampitolagaga Singles Party